केपी ओली र सीके राउत बीच फरक: देश तोड्न चाहेको केपीले हो
अचम्मको समाचार आएको छ: केपी ओलीले भारतमा पनि संविधान सभा विफल भएर भारत पाकिस्तान दुई टुकड़ा भएकै हुन, नेपालको संविधान सभा सफल हुनु नै पर्छ भन्ने छैन भनेर भनेको समाचारमा आएको छ। मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ, केपी प्रधान मंत्री बन्न शारीरिक रुपले असक्षम, वामदेब मानसिक रुपले। तर आज लागिरहेको छ, केपी मानसिक रुपले पनि तैयार हुनुहुन्न कि?
मधेसी विरुद्ध विभेद कायम रहे मधेश अलग देश स्थापना गर्ने कुरा सीके राउत भन्छन, तर उपेन्द्र यादव त्यसो भन्दैनन्। नेपाल देश यादव हरुले स्थापना गरेको देश। यो आफ्नो देश छोडेर कहाँ जाने? उपेन्द्र यादवले त्यस्तो भन्छन। बरु राजस्थान बाट भागेर आएका शाह, राणा, ओलीहरुलाई नेपालबाट धपाउने --- उपेन्द्र यादवको तर्क त्यस किसिमको छ।
केपी ओली अर्काको देशमा आएर देश तोड़फोड़को कुरा गर्ने? सत्ताकालागि नेपालका नेताले जेसुकै गर्छन, यहाँसम्म कि देश पनि तोड्छन् भन्ने कुरा केपी ओलीको आजको अभिव्यक्तिले प्रमाणित गरिदिएकोछ। नेपाललाई दुई टुकड़ा पारेर केपी ओली प्रधान मंत्री हुन्छन् भने देश टुटेकै राम्रो केपी को लागि। केपीको पुर्वज भारतको कुन भागबाट आएको? ख़ालिस्तानबाट हो?
न प्रधान मंत्री बन्न का लागि केपीसँग साधारण बहुमत छ, न उसँग छेउ न टुप्पोको सात विनाश क्षेत्र को नक्शाका लागि दुई तिहाई छ। यो नेताजीलाई अंकगणित सिकाउनु पर्ने हो?
Constituent assembly constitution ethnic prejudice federalism janajati Madhesh madhesi Nepal Nepalese Constituent Assembly right to self determination Terai